नारायणी लिफ्टबाट बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याइने
साउन १४ चितवन । वर्षामा मात्र सञ्चालन हुँदै आएको नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाले आगामी वर्षदेखि १२ महीना नै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने भएको छ । आयोजनाले नयाँ उपकरण जडान गरी वर्षैभरि पानी छाड्ने लक्ष्यसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोजनाले धानखेतीका लागि वर्षायाममा मात्र पानी छाड्ने गर्दछ । हाल प्रतिसेकेन्ड २ हजार लिटर क्षमताका दुईओटा र प्रतिसेकेन्ड ४ हजार लिटर क्षमताका दुईओटा पम्पले लिप्mट गरी नहरमा पानी पठाइँदै आएको छ । यी पम्प पुराना र खर्चिलो हुन थालेपछि नयाँ मोटर जडान गरी हिउँदमा पनि सिंचाइ आपूर्ति गर्ने योजना बनाइएको नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख इन्जिनीयर खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिए । ‘आयोजनालाई कम खर्चिलो बनाउदै बाह्रै महीना पानी दिन सक्नेगरी बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने ।
पाठकका अनुसार लिफ्टमा चारओटै मोटर नयाँ जडान गर्न बोलपत्र आह्वानसमेत भइसकेको छ । ३५ करोडदेखि ४० करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ पम्प जडान गर्न लागिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले पम्प जडानका लागि रू. १९ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग रकम स्थानीय तह र अन्य निकायबाट पुनः प्राप्त हुने पाठकले बताए । नयाँ पम्प जडानसँगै विद्युत् खपत कम हुने, मर्मतसम्भार खर्च घट्ने र चलाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हाल सञ्चालनमा आएको पम्प ११ हजार भोल्टबाट चल्छ भने नयाँ पम्प ६ दशमलव ६ हजार भोल्टबाट चल्ने भएकाले खर्च पनि कम हुन्छ,’ पाठकले भने ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले लिफ्टको निरीक्षण गरी स्तरीकरणका लागि आवश्यक पहल गरेपछि लिफ्टमा नयाँ उपकरण जडानका लागि प्रक्रिया थालनी भएको हो । यसका लागि बारम्बार सुझाव र बजेट माग गरिए पनि हाल महानगर प्रमुख दाहालको सक्रियतामा लिफ्टले पूर्णता पाउने भएको छ । कृषिउपजको उत्पादन बढाउन पनि सिंचाइको अपरिहार्य भएकाले यस कामलाई गति दिएको महानगरले बताएको छ ।
हाल सञ्चालित पुराना पम्पको मोटर पानी माथि छन् भने अबको नयाँ पम्प पानी मुनि जडित अत्याधुनिक रहनेछ । नारायणी लिफ्ट सिंचाइ जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाटले लिफ्टले भरतपुर महानगरपालिकाको ३ हजार ५०० हेक्टर जमीनमा प्रत्यक्ष रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको बताए ।
पम्प सञ्चालनमा वार्षिक ३ करोड खर्च हुँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि खर्च कम हुने र उत्पादनमा वृद्धि हुने रानाभाटको भनाइ छ । हाल यस आयोजनाबाट सिंचाइ सुविधा पुग्ने जग्गामा वार्षिक रू. १८ करोड बराबरको धान उत्पादन हुँदै आएको छ ।
२०४० सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त आयोजनाबाट आएको पानी खगेरी सिंचाइमा मिसाएर पश्चिम चितवनका विभिन्न वडाको खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाइ गरिँदै आएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ नारायणगढमा राखिएको पम्पले नारायणी नदीको पानी तानेर भरतपुर महानगर क्षेत्रमा नहर, कुलो हुँदै पानी पठाउँदै आएको छ ।
आयोजानाको पानी असार अन्तिम सातादेखि कात्तिक पहिलो सातासम्म धान रोपाइँ तथा धानबालीका प्रयोग हुने गरेको छ । बाह्रै महीना पानी दिन सके हिउँदमा यस क्षेत्रमा तरकारी, लहरेबाली, मकै लगायत कृषिउपजको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको बक्यौता रकम बढ्यो[२०७७ सावन, १८]
सौराहाका पर्यटन व्यवसायीद्वारा सेवा दिन शुरु[२०७७ सावन, १७]
नारायणी लिफ्टबाट बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने[२०७७ सावन, १६]
पुनर्बहालीको माग गर्दै बोटलर्स नेपाल (तराई)का मजदूर पुनः आन्दोलनमा [२०७७ सावन, १४]
नारायणी लिफ्टबाट बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याइने[२०७७ सावन, १४]
चितवनमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका एक पुरुषको मृत्यु [२०७७ सावन, २०]
अंकुरम एकेडेमी सञ्चालनमा[२०७७ सावन, २०]
आलु उत्पादन ५० प्रतिशत घट्यो[२०७७ सावन, २०]
मेलम्चीमा पहिरोः आठ जना बेपत्ता, एक जनाको उद्धार[२०७७ सावन, १९]
अरनिको राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालन[२०७७ सावन, १९]
राजस्व अधिकृत घूससहित अख्तियारको नियन्त्रणमा